तिजको हर्ष उल्लास जताततै भएपनि मायादेवीलाई तिजले छाेएन ! — Himali Sanchar हिमाली संचार
तिजको हर्ष उल्लास जताततै भएपनि मायादेवीलाई तिजले छाेएन !
भदौ १४ शनिबार : मोरङको रंगेली नगरपालिका वार्डन–७ मा वस्दै आएका मायादेवी ढकाल परिवारलाई विगतको वर्षझै यसवर्ष पनि तिजको रमझमले छुुुन सकेको छैन। ७० वर्षिया मायादेवी ३० वर्षिया छोरी गिता र ४० वर्षिय छोरा तारा बहादुर ढकालसंगै वस्छिन।
मायादेवीले गरिवि र घरको पिडाका कारण तिज मनाउन नसकेको वताइन। तिजको रहर कस्तो हुुन्छ अव त विर्सि नै सकियो उनि भन्छिन तिज आउछ जान्छ तिज मनाउन न त परिवारमा मान्छे नै छन न त घरमा केहिनै छ।
झण्डै १५ वर्ष अघि श्रीमानको मृत्युु भएपछि आफुुहरुले गरिविका कारण तिजमात्र होइन कुुनै चाडपर्वको खुुशिका साथ मनाउन नसकेको उनको भनाइ छ। छोराछोरीले साहारा दिनुुपर्ने यो उमेरमा छोराछोरीको सहारा आफुु वनेको उनि सुुनाउछिन।
भगवान शिवको आर्शिवाद पाइन्छ कि भनेर तिजको व्रतभने लिने गरेको उनि वताउछिन। मिठो मसिनो घरमा केहि छैन केखाने त्यहि भएरपनि आफनो कर्तव्य निभाउछुु व्रत लिन्छुु उनी भन्दछिन केहि गर्न खोज्दा दम वढ्छ धेरै कष्ठ हुुन्छ चाडवाडमा मिठो मसिनो खान त मन लाग्छ तर पाए त खानुु कसले दिन्छ।
घरमा जे छ त्यो छोराछोरीलाई पकाएर ख्वाउछी छोरो लाटो छ घरभन्दा वाहिर धेरै वस्छ दिनभरी चर्को घाममै पनि वसिन्दिछ त्यस्तैमा रमाउछ केगर्नुु उनले भनिन।
छरछिमेकीमा छोरीचेली आएको देख्दा आफनो परिवारकासाथ सवै मिलेर तिज मनाउने रहर जागेपनि गरिवि र छोराछोरीका अवस्था हेरेपछि ती सवै रहर आशुुमा वग्ने गरेको उनि सुुनाउछिन।
सुुकुुम्वासी ती परिवार वसपार्क सडक छेउको ऐलानी जग्गामा वस्दै आएको थियो। सडक र वसपार्क विस्तारगर्ने क्रममा परिवारको उठिवास भएपछिन रंगेली नगरपालिकाकाले वस्न पाचधुुर जग्गा उपलव्ध गराएको थियो। उक्त जग्गामा टहरा वनाएर सो परिवार वस्दै आएका छन।
जेठी छोरीको छोराले घरमा आएर विद्यार्थीलाई टयुुसन पढाउने गरेको र त्यहि टयुुसन फि बाट उनको घर चल्ने गरेको सुुनाउदै उनि भन्छिन पहिले त सानोतिनो व्यापार गरेर जिविका चलााउथ्ये अव त शरीरले पनि सक्दैन के गरेर कमाउनुे कसरी परिवार चलाउने।
यस्तो अवस्थमा सवैलाई सहयोग समेत गर्न उनले आग्रह समेत गरेकि छिन। ३० बर्षकाे छाेरी भएता पनि उनी समेत शुष्त मनस्थिति छिन दैवले हामी गरिव परिवारलाई सधैं हेला गरेको बताईन।
घरकाे कान्छो छाेराले समेत घरकाे विजाेग देखेर ३ बर्ष अगाडि अात्माहत्या गरि मरेकाे भन्दै बिलाैना समेत गरिन। घरमा नत खाने अन्न छ न त काेहि साहारा नै छ यस्तो अवस्थामा कसैले सहयोग गरिदिए ठुुलो राहत हुुने उनि सुुनाउछिन।
जर्नेल शाहकाे विदाई नेपाली सेनाकाे इतिहासमै पहिलाेपटक भएकाे चर्चा
कोरोना सङ्क्रमण हुदाँ गुम्यो सुरक्षा गार्डको जागिर
महिला–पुरुष मितेरी: श्याम र श्यामकुमारी नेपालकै पहिलो मित–मितिनी
रक्सी खाने र झगडा गर्ने बानीले परिवारै सखाप
भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक करोड तीन लाख ५ हजार
विदेशबाट फर्किएर भैँसीपालन, परिवारसँग रमाउँदै मनग्य आम्दानी
नेपाल सरकारले नीतिगत सुधार गरे विप्रेषण बढ्छ : बस्नेत
रामप्रसाद ढुंगेल/युएई – वैदेशिक रोजगारीको क्रममा परदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई वैधानिक तरिकाले रकम भित्र्याउन नेपाल सरकारले...
सद्भावको ११ औ बार्षिकउत्शव साधारणसभामा रंगेलीका पत्रकार सम्मानित
रबिन्द्र बराल/मोरङ – मोरङको “कहिले पनि नअस्ताउले सूर्यको शहर, गाउँशहर उज्यालो बनाउने सदभावको रहर” भन्ने...
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट: लुम्बिनीले सुदूरपश्चिमलाई ६ विकेटले हरायो
काठमाडौं – चौथो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा लुम्बिनी प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पराजित...
रंगेली प्रहरीले ७ बोरा सुर्ती सहित एक मोटरसाइकल बरामद
रबिन्द्र बराल/मोरङ- मोरङको रंगेली नगरपालिका-४, स्थित चोप्राह बोर्डरबाट अबैध रूपमा भन्सार छलि भारतबाट नेपाल भित्र्याउदै...
विशाल भट्टराईको पालिकामा नेकपामा पहिरो, सयौ कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश (भिडियो सहित)
खोटाङ – खोटाङ जिल्लामा नेपाली कांग्रेस युवा नेता रविप्रकाश राईले १ सय जना युवा नेकपा...
नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज मकाउ आउने, पहिलो पटक मकाउमा अवतरण गर्दै
नेपाल एयरलाइन्स न्यारोबडी भोली मकाउ आउने, १ सय ४७ जना नेपाली काठमाण्डौ उड्ने तयारी
हात भाँचिदा सामान्य उपचारसमेत भएन गंगाजमुना ग्रामीण अस्पतालमा
मकाउबाट आज नेपाल एयरलाइन्सको जहाज मार्फत १ सय ४७ जना नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किए
मोरङको कानेपोखरी-रंगेली सडक खण्डमा स्किुल बसले किच्दा, शिक्षिकाको घटनास्थलमै मृत्यु
मगर संघ मकाउले पहिलो बार्षिकोत्सवसहित धुमधामले माघे संक्रान्ति मनायो
गायिका जुनी खालिङ राईको पुर्वेली लोक भाका “तिनपाने तुरुक्कै” सार्वजनिक (भिडियो सहित)
मकाउमा एक नेपाली युवाले ट्रेडिङ कम्पनी संचालनमा ल्याए, आज माधे संक्रान्तिको दिन विशेष शुभारम्भ
अस्पताल हिडेका युवक बसभित्रै मृत भेटिए